Masar & Suudaan oo dalbaday dhexdhexaadin - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Masar & Suudaan oo dalbaday dhexdhexaadin
Masar & Suudaan oo dalbaday dhexdhexaadin
Dalalka Masar iyo Suudaan ayaa mar kale ku baaqay dhexdhexaadin caalami ah si loo soo afjaro muran muddo soo jiitamayay oo ku saabsan dhismaha biyo xireenka Itoobiya ee wabiga Niil oo labada dalba ay ka cabsi qabaan inuu saameyn ku yeesho biyahooda.
Baaqan ayaa yimid iyadoo Madaxweynaha Masar, C / fataax Al-Sisi, uu booqanayo Suudaan markii ugu horreysay tan iyo markii xukunka laga tuuray Madaxweynihii hore, Cumar Al-Bashiir.
Waxay sheegeen inay ahayd in heshiis la gaaro ka hor inta aysan Itoobiya bilaabin marxaladda xigta ee buuxinta biyo xireenka bisha Juulay ee sanadkaan.
Balse Xukuumadda Addis Ababa ma rabto dhexdhexaadiyeyaal dheeri ah . khilaafkanna waxaa uu umuuqdaa mid sii cakariya xaaadda gobalka oo la daalaa dhacaya colaado iyo xasilooni daro.
Cabdul Fattax al-Sisi wuxuu kulamo gooni gooni ah laqaatay hogaamiyaasha rayidka iyo militariga ee Suudaan isaga oo kala hadlay in mowqif mideysan ay ka yeeshaan arrinta biya xireenka.
Masar iyo Suudaan waxay ku baaqeen wareeg cusub oo wadahadal ah iyada oo la ballaariyay koox dhexdhexaadin ah oo ay ku jiraan saraakiil ka socota Midowga Afrika, Mareykanka, Midowga Yurub iyo Qaramada Midoobey .
Previous articleDHAGEYSO:-Warka Subax ee Radio Risaala 07-03-2021
Next articleFahad Yaasiin oo lagu eedeeyay fashilka shirkii Rooble & Musharixiinta